Uppsala: Nin sheegay in uu khaniisiinta u furayo Masaajid | Somaliska
Nin lagu magacaabo Mohamed Omar oo ku nool degmada Uppsala ayaa ku dhawaaqay in uu furayo masaajid ay ku tukadaan dadka khaniisiinta ah iyo dumarka. Waxa uu telefishinka TV4 u sheegay in masaajidka uu noqon doono mid ka soo horjeeda waxa uu ugu yeeray masaajida xagjirka ee ka jira Sweden.
Qorshaha ninkaan uu ku furayo masaajidka ayuu ku sheegay in uu yahay mid ku dhisan la qabsiga casriga ah ee Sweden iyo Yurub isagoo sheegay in masaajida ka furan ay yihiin kuwo ay hogaamiyaan dad xagjir ah. Waxa uu sheegay in goobta uu furayo ay noqon doonto mid dumarka door weyn ay ka qaadan doonaan. Waxa uu intaas ku daray in goobta uu furayo lagu qaban doono doodo, heeso iwm isla markaana uu yahay masaajid ku dhisan caqiiqada Muslimiinta sufiyada ah sida uu ku qoray boggiisa.
Sheekada ninkaan uu ku dhawaaqay ayaa ah mid cajiib ah. Waxa uu u muuqdaa mid ka faaidaysanaya culeyska lagu hayo Muslimiinta Sweden oo beryihii dambe lagu eedeynayo in ay yihiin kuwo ay hogaamiyaan dad xagjir ah. Qaasatan arinta ku dhacday gudoomiyaha uruka Muslimiinta Sweden Omar Mustafa ayaa Swedishka iyo qaar ka mid ah dad muslimiin isku sheegaya ay ku eedeeyeen in uu yahay xagjir khaniisiinta neceb una shaqeeya ururka Akhwaanu Muslimiin.
Ninkaan ku nool Uppsala ayaa u muuqda mid qaaday talaabo argagax leh isagoo abuuraya qilaaf balaaran oo Musliminta dhexdooda ah.
Warbixin soo bandhigtay fashilka ku yimid isdhexgalka soo galootiga
April 20, 2013 at 21:19
asc dhamaan inta kuxiran webkaan ninkaan sheekada uu keenay waxey umuuqataa inuu khaniis yahay asaga meeshaasna uu fursad karaadinaayo uukusoo fuulo masraxa siyaasadda lkn waxaan kacabsanaa inuu naftiisa kuwaayo intuu mansab iyo magac kuraadinaayo edeb darrida uu silaamka kuhaayo lacnad haku dhacdee
ilahay mujicso kugu rid diinteena buu cebenaya ilahay wax uga baryeena noocaso kaleh umada inu ka qabto amiin usomara
ASC WAAN IDIIN SALAAMAY DHAMAAN BAHDA SOMALISKA.COM INTAA KA DIB , NINBA MEEL BAA U DARANEE , WAXAAN RABAY INAAN WEYDIIYO MAAMUL KA IYO MADAXDA SOMALISKA.COM MA SAXBAA IN BIRI AY TAHAY MAALINTII LA AAS AASAY WEBSITE KAN SOMALISKA.COM MISE WAAN KHALDA NAHAY- MAXAADSE INOOGU TALA GASHAY HADDII AAN SAXANAHAY INAAN KAGA QEYB QAADANO ….?
waa wax layaableh nin kaan waan aqaaanaa yaaaaaaaaaap
April 20, 2013 at 22:19
isagoo abuuraya qilaaf balaaran oo Musliminta dhexdooda ah.. ..ayuu ku soo gaba gabeeyey wariyihi warka inoo turjumay Su’aal ku socota wariyaha Ma dad muslimiin ah aya isku khilaafaya KHANIIS / QANIS ? yada oo la ogyahay halka diinta islamka iyo muslimiintuba ka taagan yihin khaniiska.
April 21, 2013 at 01:21
Munaafaq waaye kan ee yaan la buun buunin warkiisaan beenta mana u soconeyso Allaha ka hortago shartiisa daalimkaan insha Allaah.
Alllah ayaa ku filan. Qofkii u istaaga inuu diinta islaamka ee suuban ceebeeyo wax xuna ka Sheega fircoon ayaa hortiis la haligey. Iyo Kuwa kale
ASC @ somaliska.com : anigoo ka mid ah bahda ku taxan website kan waxaan ka codsan lahaa ine beejka habka uu u samey san yahay waxa laga bedalo oo loo celiyo sidii sii hore ee qurux da badneed waa un iga Codsi ama talo, waayo , waan ku wareeerney , dhan waliba iyo xaga Muuqaalka farta ah , waad mahadsan tihiin.
yusuf somali says:
Asc dhaman Asxaabta ninkaas waa nin iran shiici ah waxaas iyo ka badan ka filo shiicada mar ay dhahaan waan gaalownay hada qaniis ayaa nahay wax badana waan sugeenaa ilaah ayaan ka migan galnay islamka ilaah ayaa difaacayo
musiba ilahjay kugu riido waa wax duli ah wuxu ku hadlaayo ciyaalka xitaa kuma hadlaan nacalad kugu dhacday sha alaha
illahay umada hakaa qabto iyo sharka aad waddo nacalada rabi dushaada ha ahaato illah waxan kaga bariney inaad awoodi weydo inaad sameyso waxad ku dhawaqdey ameen ameen ameen muslimita faataxada usoo mara ninka inuu illah inaga qabto
ASC, WALAALAYAAL SU’AASHA UGU HOREYSA EE AY NAFTEYDU I WEYDIISAY AYAA AH MAXAA ISKU XIRI KARA NIN SHEEGTAY INUU QANIISIINTA TAAGEERAYO IYO GURYAHA ALLE(MASAAJIDA) SUBXAANALAAH,
WAXAAN ALLE KA BARYAYAA INUU USOO DEDEJIYO CIQAABTII KU DHACDAY QOOMU LUUD.